December 2014 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
လေးဖြူ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
8:08:00 AM music No comments
ကျနော် အကြိုက်ဆုံး တေးသံရှင် ကိုလေးဖြူ ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် စီးရီးဖြစ်တဲ့
ဒိုင်ယာရီ ကို တောင်းဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကိုလေး ပရိတ်သတ်တွေ ကျေနပ်ကြမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်..
pCloud ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
သီချင်း ၁၁ ပုဒ်ပါဝင်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်က 75 MB ရှိပါတယ်..
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၂ )မြန်မာစာတန်းထိုး
4:17:00 AM Supernatural No comments
စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ကြည့်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို
တင်မယ် မတင်ဘူး ဆိုခဲ့တဲ့ Supernatural အခုဆိုရင်
season 8 ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ..
အစပိုင်းတွေ ပြန်ရှာရခက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့
Season complete အဖြစ် ဒီနေ့ပဲ စုစည်းပေးထားပါတယ်..
srt by: http://www.mmsubtitles.com/
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၁ )မြန်မာစာတန်းထိုး
4:15:00 AM Supernatural No comments
Exodus Gods And Kings ( 2014 ) 720p HDCAM
4:09:00 AM 2014, movies No comments
ဒီကားကတော့ Action | Adventure | Drama
၂၀၁၄ ထွက်အသစ်ပေါ့ဗျာ အကြည်တော့မရသေးဘူး
ဖုန်းသမားတွေ အဆင်ပြေအောင်ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး အသေး ၂ မျိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်..
Dark.Touch (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
3:49:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
ဒီကားကတော့ Adventure | Horror
ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..
Download 374 MB
Download 997 MB
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ album အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ MTV
6:40:00 AM music No comments
အသစ်ထွက်တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ album ကို
FB မှာ ko Nay min တင်ထားတာတွေ့လို့ ခွင့်တောင်းပြီး
Bluray quality နဲ့ သီချင်း ၁၅ ပုဒ်ပါပြီး
1.1 BG ရှိပါတယ် လိုင်းကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတော့
အဆင်ပြေပြေ ဒေါင်းယူနိုင်အောင် pCloud ကနေ
John Carter (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
4:11:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
ဒီကားကတော့ Action | Adventure | Fantasy
ဒေါင်းဖို့ အဆင်မပြေရင် ဒီမှာ ဖတ်ပါ..
srt by: gurelia
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၀ )မြန်မာစာတန်းထိုး
3:58:00 AM Supernatural No comments
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၉ )မြန်မာစာတန်းထိုး
3:56:00 AM Supernatural No comments
Mojosoft Photo Calendar Studio 2015 v1.18
7:29:00 AM software No comments
နှစ်သစ်မှာ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Calendars လေးတွေ
ဖန်တီးရအောင် Photo Calendar Studio အသစ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Install မလုပ်ပဲ ကလစ်လေးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ယုံနဲ့
အသင့်သုံးနိုင်အောင် Portable version လေးရော...
Full version ပါ နှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Full version အဖြစ်သုံးချင်သူတွေအတွက်
Serial Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်..
အောက်မှာ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
အသုံးပြုနည်းမသိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် video ဖိုင်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
MX Player Pro v1.7.35.nightly.2014
5:32:00 AM Android, Player No comments
MX Player Pro v1.7.35.nightly.2014...
ဒီနေ့ပဲ update ထွက်တဲ့ MX Player Pro v1.7.35.nightly ပါ..
Android သမားတွေအတွက် မရှိမဖြစ်..Playerပြပါဆိုရင်
ဒီ MX Player လေးကို ပြရမှာပါ..
ဒီ Player လေးနဲ့ ဖွင့်လို့ မရတဲ့ video format ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ..
ဒါပေမယ့် MKV format တွေကို ဖွင့်မရတာ
mp4 တို့ avi တို့ကို MX Player နဲ့ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေပေမယ့်..
mkv ဖိုင်တွေ ဖွင့်တဲ့အခါ..အသံပဲကြားရပြီး ရုပ်မမြင်ရတာ..
မြင်ရတော့လည်း ထစ်ထစ် နဲ့ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတာတွေ
ကိုယ့်ချင်တဲ့ MKV ဖိုင်လေးကို MX Player နဲ့ ဖွင့်လိုက်..
အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ..
ကြည့်လို့ မရတဲ့ video ဆိုရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ နေရာလေးကို
ထောက်လိုက်ရင် အောက်က ပုံအတိုင်းကျလာပါမယ်..
အဲဒီမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း S/W decoder ကိုရွေးလိုက်ရင်
အရင်က အသံပဲကြားရပြီး ရုပ်မမြင်ရတာ..
မြင်ရတော့လည်း ထစ်ထစ် နဲ့ ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတဲ့
video တွေကို အဆင်ပြေပြေပြေကြည့်နိုင်ပါပြီ..
နောက်ဆုံးထွက် MX Player Pro v1.7.35.nightly version ကို
အောက်က အဆင်ပြေရာကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၈ )မြန်မာစာတန်းထိုး
3:46:00 AM Supernatural No comments
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၇ )မြန်မာစာတန်းထိုး
3:44:00 AM Supernatural No comments
4:27:00 AM 2014, Animation, movies No comments
Animation | Adventure | Comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားသစ်လေးပါ..
Animation ချစ်သူတွေ လက်မလွှတ်သင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ..
IMDb မှာ Ratings: 7.1 အထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမို့
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၆ )မြန်မာစာတန်းထိုး
4:20:00 AM Supernatural No comments
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၅ )မြန်မာစာတန်းထိုး
4:17:00 AM Supernatural, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
ကျနော့် ဆိုဒ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်တနေရာမှာ
ဇာတ်လမ်းအတွဲလိုက် ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာရှာပါ
ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ season ကို အလွယ်တကူ အစကနေပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်..
အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်ပါ..
အနီရောင် မြှားပြထားတဲ့ နေရာကိုကလစ်ပြီး ထောက်လိုက်ရုံနဲ့
ကျလာတဲ့ အထဲကနေ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ အပိုင်းကို သွားလို့ရပါတယ်..
ARROW Season3complete မြန်မာစာတန်းထိုး
10:23:00 PM ARROW Season3complete, complete season, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်6comments
ARROW Season ကို ကြည့်ချင်ပေမယ့်
အစကနေ ပြန်ရှာရခက်လို့ မကြည့်ဖြစ်တဲ့
ARROW Season3ကိုလည်း ထွက်ပြီးသလောက်ကို
အောက်မှာ အစဉ်အတိုင်း ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
အပိုင်းမှားနေတာရှိရင်လည်း comment မှာပြောခဲ့ပါ..
ARROW Season2complete မြန်မာစာတန်းထိုး
10:06:00 PM ARROW Season2complete, complete season, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်2comments
ARROW Season2ရဲ့ (၂၃)ပိုင်းကို
ARROW Season 1 complete မြန်မာစာတန်းထိုး
9:53:00 PM ARROW Season 1 complete, complete season, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်4comments
ARROW Season 1 ရဲ့ (၂၃)ပိုင်းကို
Supernatural Season4complete မြန်မာစာတန်းထိုး
9:12:00 PM complete season, Supernatural, Supernatural Season4complete, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်2comments
Supernatural Season ကို ကြည့်ချင်ပေမယ့်
Supernatural Season4ရဲ့ (၂၂)ပိုင်းကို
အပိုင်းမှားနေတာ ရှိရင်လည်းcomment မှာပြောခဲ့ပါ..
Supernatural Season3complete မြန်မာစာတန်းထိုး
8:57:00 PM complete season, Supernatural, Supernatural Season3complete, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Supernatural Season3ရဲ့ (၁၆)ပိုင်းကို
Supernatural Season2complete မြန်မာစာတန်းထိုး
8:46:00 PM complete season, Supernatural, Supernatural Season2complete, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင်6comments
Supernatural Season2ရဲ့ (၂၂ )ပိုင်းကို
Rurouni kenshin ဇာတ်ကားသစ်လေး အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး အပိုင်း ၂
7:29:00 PM movies No comments
ဇာတ်ကားရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတယ်ဘော်ဒါတို့အတွက် အရမ်းကောင်တဲ့ အပိုင်းဆက်ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ အပိုင်း ၂ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတန်းအနေနှင့်တော့ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပေးထားပါတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းပါတယ်။
ဘော်ဒါတို့ နည်းပညာများ, Software and Application များကို အဆင်ပြေစွာဖြင့်ယူသွားခဲ့ပြီးနောက်
ကျေးဇူးပြု၍ ကြော်ငြာကလစ်ရန်မမေ့ပါနဲ့။ ထိုကြောင့်အောက်က ကြော်ငြာတစ်ခုကလစ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီ
After you got Technology, Software and Application at my website,Please,you don't forget to click my Ads.
Rurouni kenshin ဇာတ်ကားသစ်လေး အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး အပိုင်း ၁
7:27:00 PM movies No comments
ဇာတ်ကားရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတယ်ဘော်ဒါတို့အတွက် အရမ်းကောင်တဲ့ အပိုင်းဆက်ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ အပိုင်း ၁ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတန်းအနေနှင့်တော့ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပေးထားပါတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ ဗွီဒီယိုလုပ်ရမှာကောင်းဆုံး application လေး-VideoShow Pro - Video Editor v3.8.3 apk
7:23:00 PM Video Editor No comments
မနေ့က အစ်ကိုတစ်ယောက် လာတောင်းထားတာတွေ့လို့ ဗားရှမ်းသစ်ကို ထွက်လာတာနဲ့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက် သုံးချင်းတဲ့ဘော်ဒါတို့ Update သုံးရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတာပေ့ါဗျာ။ဒီကောင်လေး၏ အသုံးဝင်းပုံမသိတဲ့သူများအတွက်တော့ ကျနော်နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ကိုယ်
ကြိုက်တဲ့ Themes တွေကိုလည်းေ၇ွးချယ်လို့ရနိုင်ပြီး titles မှာမိမိရေးချင်တဲ့စာတွေနဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲလို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် music တွေနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် Facebook & YouTube ပေါ်သို့လည်းတိုက်
ရိုက် share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အ၇မ်းကောင်းတဲ့ကောင်းလေးပါ ဘော်တော်တို့ရယ်။ ကိုယ်တိုင် စမ်းသတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ။ဒီကောင်း၏ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့18.5MB ဖြစ်ပြီး Android: 2.2 နှင့်
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၄ )မြန်မာစာတန်းထိုး
3:43:00 AM Supernatural, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၃ )မြန်မာစာတန်းထိုး
3:41:00 AM Supernatural, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် No comments
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၂ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၁ )မြန်မာစာတန်း...
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ album အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဒိတ်ဒ...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁၀ )မြန်မာစာတန်း...
Rurouni kenshin ဇာတ်ကားသစ်လေး အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး အပ...
Death Race3(2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Death Race2(2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၂၃ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၂ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၈ ) အပိုင်း ( ၁ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၂၂ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၂၁)မြန်မာစာတန်းထိုး
The Warrior's Way (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
Tarzan (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Olympus Has Fallen (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Croods (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
PicSay Pro - Photo Editor v1.7.0.5
Gallery Vault-Hide Video&Photo v1.11.2
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၂၀ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၉ )မြန်မာစာတန်း...
Samsung Galaxy S5 SM-G900F Official Firmware 5.0 L...
Edge of Tomorrow (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
MAMA (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၈ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၇ )မြန်မာစာတန်း...
Captain America: The Winter Soldier ( 2014 ) မြန်မ...
Captain America: The First Avenger (2011) (မြန်မာစ...
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၆ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၅ )မြန်မာစာတန်း...
The Amazing Spider-Man2( မြန်မာစာတန်းထိုး )
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၃ ၊ ၁၄ )မြန်မာစ...
47-Ronin ( 2013 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Nurse 3D (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Transformers (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Flowers of War (မြန်မာစာတန်းထိုး)
xmen days of future past ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
After Earth (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Arthur Christmas (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
Warrior King2(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၁ ၊၁၂ )မြန်မာစာ...
ကျနော် ရည်းစား စုံထောက်မလေး မြန်မာစာတန်းထိုး
Blood of Redemption (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁၀ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၉ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၈ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၇ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၆ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၅ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Ninja Apocalypse (2014)မြန်မာစာတန်းထိုး
Switch (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၄ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၃ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Dracula Untold (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၂ )မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၇ ) အပိုင်း ( ၁ )မြန်မာစာတန်းထိုး
She's the Man (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၂၂ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၂၁ )မြန်မာစာတန်း...
Wolves (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၂၀ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၁၉ )မြန်မာစာတန်း...
Son of God (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
အာဗန်ဂျာ ၂၀၁၂ မြန်မာစာတန်းထိုး
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၁၈ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၁၇ )မြန်မာစာတန်း...
MX Player Pro v1.7.35.nightly
Internet Download Manager 6.21build 16
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၁၆ )မြန်မာစာတန်း...
Supernatural အတွဲ ( ၆ ) အပိုင်း ( ၁၅ )မြန်မာစာတန်း...